In kasta oo xaqiiqda ah in Apple ma sii daayo dhammaan sifooyinka macruufka, kuwa la sii daayay ka dhigi doonaa afka biyo aad. Nasiib wanaag idiin, macruufka cusub noqon doonaa badan oo horumarsan iyo shaqeeyaan badan ka fiican yahay qoraalkii hore. Taasi micnaheedu waa in la filayaa, waxa si kastaba ha ahaatee wax badan oo miyir lahu nagu ah in aan xuso qaababka ay u badan tahay in aad hesho la macruufka ah 9. Tallaabadan ayaa si feature macruufka u saamaxaya kuwa isticmaala si aad u samayso aad wareegay Android inay macruufka waa mid ka mid ah habab badan oo si ay u haajiraan si ay macruufka la xogta oo dhan. Kani waa xalka sahlan soo bandhigay by macruufka ah 9 in dadka isticmaala inta badan si ay u dhex xanuunsado lahaa. Waxaad ka heli inuu u wareego oo dhan photos, videos, Bookmarks, audio, buugaagta, xiriirada iyo xitaa taariikhda email iyo fariin.
Laakiin waxa ku saabsan wallpapers, waxa jira qaar ka mid ah wallpapers in aad kala soo bixi kartaa macruufka ah 9?
Waxaan ku talaabsaday inuu idin tusin dhowr ka mid ah ugu wanaagsan ee la qaraarada screen kala duwan si aad mid ka mid ah dooran kartaa in haboon adiga iyo iPhone.
1. Leyliga haragoodu 2
Hargahood oo Leyliga ma aha wallpaper celcelis ahaan laakiin halkii app ah in ka kooban yahay 42 ka mid ah jeeda screen guriga ugu fiican. Taas macnaheedu waa in aad hesho si ay u doortaan ka badan 42 wallpapers.
Screen Resolution- 960 x 640 retina xal Waayo, mid kasta oo ka mid ah 42 wallpapers
2. jeeda Qalfoofka iyo Wallpapers
Tani waa app kale iPhone oo kuu ogolaanaya in aad si buuxda u beddesho aad telefoonka ka caajiso si cajiib ah iyadoo in ka badan 1000 soo jeeda, waayo, aad screen guriga. Waxa kale oo ay timaado in ka badan 450 saamaynta uu yahey uu ka soo xusho.
Screen Resolution: xallinta Screen way kala duwan tahay iyada oo ku xidhan wallpaper aad dooran
3. xiriiri Fresh
Wallpaper Tani aad iPhone beddeli doonaa Hoosada suugaan beerta oo waa waxa coolest abid.
Screen xallinta: HD
4. Starry Night wallpaper u Mac
Wixii lover dabeecadda, tani waa mid ka mid ah wallpapers ugu fiican HD aad mar uun kartaa MAC.
Screen qaraarada kala duwan Resolution- ayaa diyaar u ah qalab kala duwan oo ay ku jiraan arrimo mini iPad. Wixii Mac ka wallpaper waxa loo heli karaa in s 1366 x 768 screen xal.
5. The Moon iyo wallpaper Badweynta
Tani waa wallpaper cajiib u ah desktop Mac ka dhigi doonaa desktop eegi weyn. Waxaa kale oo la heli karo qalabka macruufka kala duwan oo ay ku jiraan iPhone.
Screen Resolution: 800 x 600 si 2880x 1800
Sii daayo ee El Capitan 10.11 sabab dhowr bilood. Muuqaalada ay yihiin cadhoodaan oo dhan iyo Xiisaha ballan nidaam doonaa wow users Mac waqti dheer si ay u soo. El Capitan ayaa horumar ay ka horreeyay Yosemite ay ka mid yihiin daro toosh la dhisay qalab raadinta in hadda loo dhan yahay ee cimilada, Dhibcaha ciyaaraha ka mid ah natiijooyinka kale raadinta. Control Ergada ka shaqeeya si wanaagsan ula El Capitan badan u sameeyey on Yosemite. All oo dhan, horumar waa khiyaano laakiin sidoo kale arrin cajiib ah hab.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wallpapers in aad ka heli kartaa El Capitan ee 10.11.
1. rasmi El Capitan wallpaper
Sida ka horreeyay, El Capitan la iman doonaa wallpaper-ka rasmiga ah. Waxaa diyaar u ah dhammaan qalabka macruufka oo ay ku jiraan iPhone.
Resolution- Screen 5120 X 3200 ama 2800 x 1800
2. Ultimate aan la taaban karin wallpaper
Haddii tahay dahsoon aad wax yahay, tani waa mid ka mid ah wallpapers ugu fiican ee aad u socoto si aad u ogaato si aad u desktop Mac.
Resolution- Screen 1600 X 1200, 1400 X 1050 iyo 1280 X 960
Ma jiraan noocyo aad u badan oo ka mid ah wallpaper si gaar ah loogu tala galay El Capitan 10.11 inkastoo aannu ku samayn lahayn rajo iyo waxay aaminsan yihiin in tani ay sida ugu dhaqsaha badan ka beddeli doono. Waxaa muhiim ah in la ogaado in inta badan wallpapers ah in aanu kor ku xusan la shaqeyn doono oo kaliya oo ku saabsan qalab kasta oo macruufka iyo dhammaan versions of macruufka. Wax kasta oo aad doorato, waxaan rajeyneynaa in aad ka mid dhameystirta shakhsiyadaada iyo sida aad u rabto in aad Mac ama qalabka kale ee macruufka si loo eego ka helo.
> Resource > Mac > macruufka rasmiga ah 9 & OS X El Capitan wallpaper u iPhone, iPad iyo Mac